Portal:Afrika/Wadanada - Wikipedia
Warbixin guud Wadamada Afrika
Afrika (Af-Ingiriis: Afrika; Af-Carabi: أفريقيا) waa qaarada labaad ee ugu weyn qaaradaha aduunka kadib qaarada Aasiya dhanka baaxada iyo dhanka dadkaba. Baaxada Afrika waxay la'egtahay c. 30,244,050 km² (11,677,240 mi²) tiradaas waxaa ku jira dhamaan jasiiradaha lagu xisaabo Afrika. Afrika baaxadeeda waxay dabooshaa 20.3% baaxada dhulka oo dhan. Sida lagu xusay tirokoob caalami ah oo la sameeyay sanadkii 2013ka waxaa ku nool qaarada Afrika dad tiradooda ay dhantahay 1.1 bilyan taasi oo ah tiro u dhiganta todobo qeyboodoo qayb dadka dunida ku noolo maanta.
Qaarada Afrika waxaa ku hareersan biyo; Bada Mediterraniyanka waxay ka xigta waqooyi, sidoo kale Gacanka Suweys iyo Bada Cas waxay ka xigaan waqooyibari, Badweynta Hindiya ayaa kaga taala koonfurbari, iyo Badweynta Atlantika oo ka xigta galbeed. Intaas waxaa dheer, wadanka jasiirada Madagaskar iyo gasiirado kale ayaa soo hoosgala qaarada. Sida rasmiga ah waxaa qaarada Afrika degan 54 wadan oo la aqoonsan yahay, sagaal deegaan iyo labo wadan oo wali la aqoonsan. Xaga bulshada, qaarada Afrika waxaa ku dhaqan dadka ugu da'da yar caalamka marka tirada guud laga hadlayo; 50% dadka Afrikaanka ahi waa da'da ka yar 19 sano. Juquraafi ahaan, wadanka Aljeeriya ayaa ugu wayn dhulka iyo baaxada, halka Nayjeeriya ugu dad badan tahay; waxaana guud ahaan caalamka la isku raacay in badhtamaha iyo Bariga Afrika yihiin meesha aadamuhu ka soo beermeer markii ugu horeeysay. Waxaa deegaanadan laga helay lafo aad u da' weyn oo muujinaya horaantii dadka. Tusaale ahaan, wadanka Itoobiya waxaa laga helay lafaha ugu da'da weyn inta la ogyahay midaasi oo jirta 200,000 kun sano. Guud ahaan qaarada Afrika waxaa dhex mara dhulbadhaha, waxayna leedahay noocyo badan oo cimilo kala gedisan ah. Waana qaarada keli ah ee laga helo astaamaha cimilada waqooyi ilaa koonfurta dhulka.
Warbixin ku saabsan Afrika...
Wadan xul ah
Saldanadii Cadal (Af-Carabi: عدل; Af-Ingiriis: Adal; micno ahaan "Cadaalad") (sidoo kale loo yaqaanay Boqortooyada Adal) waxay aheyd boqortooyo xukumi jirtay deegaano badan oo ka tirsan Gobolka Awdal ee waqooyiga Somaliland, meelo ka mid ah dhulka Itoobiya iyo Jabuuti ilaa Eratareya. Boqortooyada Cadal waxey ka mid ahayd boqortooyada ugu taariikhda dheeraa uguna awooda weynaa gayiga iyo deegaanada ay dagaan dadka Soomaalida iyo agagaarkooda. In kastoo boqortooyadu ka bilaabantey magaalada taariikhiga ah ee xudunta u ahayd ee Saylac waxay saldhigyo waaweyn ku lahayd magaalada Harare iyo nawaaxigeeda. Magaalada Saylac ayay ka bilaabantey boqortooyadu ka dib ku fidey deegaanka geeska Afrika. Sanadihii 1415 ilaa 1577 ayay boqortooyada Cadal ugu awood badneyd goortaas ooy maamuleysay in ka badan shan kun oo kilomitir isku wareeg ah. Boqortooyada Cadal sidoo kale loo yaqaano Adal waxa lagu xasuustaa dagaalo waaweyn oo ay inta badan la galeen Itoobiya.
Benin Burkina Faso Cape Verde Côte d'Ivoire Gambia Ghana
Angola Kameroon Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika Jad Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa
Guinea Gabon São Tomé iyo Príncipe
Burundi Comoros Djibouti Eritrea Ethiopia Kenya
Madagascar Malawi Mauritius Mozambique Rwanda Seychelles
Somalia Koonfur Suudaan Tanzania Uganda Zambia
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Afrika/Wadanada&oldid=165029"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 08:58, 2 Jannaayo 2017.